ဘေဘီလေးကို ငှက်ပျောသီး ကျွေးပေးပါ - Hello Sayarwon
ငှက်ပျောသီး ဆိုတာက ဘေဘီလေးတွေ ပထမဆုံး စစားဖူးတဲ့ အသီး တစ်မျိုးပါ။ ငှက်ပျောသီးက အရသာရှိသလို အာဟာရဓာတ်လည်း ကြွယ်ဝပြီး ကလေးရဲ့ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကိုလည်း အကောင်းဆုံး ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခေါက်တော့ ဘေဘီလေးကို ဘယ်အချိန်မှာ ငှက်ပျောသီး စကျွေးရမလဲ ဆိုတာနဲ့ ငှက်ပျောသီးက ဘေဘီလေးအတွက် ဘယ်လောက် အကျိုးကျေးဇူးများလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးသွားပါမယ်။
ဘေဘီလေးကို ဘယ်အချိန်မှာ ငှက်ပျောသီး စကျွေးမလဲ…….
ဘေဘီလေးကို အသက် ၆ လပြည့်ပြီး solid food စပြီးကျွေးလို့ ရပြီဆိုတာနဲ့ ငှက်ပျောသီးကို စကျွေးလို့ ရပါပြီ။ စကျွေးတဲ့အခါ ငှက်ပျောသီးကို သေချာလေး ညက်နေအောင် ချေဖို့ လိုပါမယ်။
ချေထားတဲ့ ငှက်ပျောသီးကိုလည်း လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်းစာလောက်ပဲ ကျွေးရပါမယ်။ လတ်ဆတ်တဲ့ ငှက်ပျောသီးကို သေချာလေး ရွေးမိဖို့တော့ လိုပါမယ်။
ငှက်ပျောသီး ကပေးတဲ့ ဘေဘီလေး ကျန်းမာရေး
ဘေဘီလေးကို solid food စပြီး မိတ်ဆက်တဲ့အခါ ငှက်ပျောသီးကို ထည့်ပြီး မိတ်ဆက်ပေးသင့်တယ်လို့ ပြောရတာက အခုလို ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရှိနေတာကြောင့်ပါ။
ငှက်ပျောသီးက အမျှင်ဓာတ် ကြွယ်ဝတာကြောင့် ဘေဘီလေးရဲ့ အူနံရံလေးတွေကို ကျန်းမာစေပြီး ဝမ်းချုပ်မှုကို ကင်းစေနိုင်မှာပါ။ ဘေဘီလေးကို ဝမ်းမှန်စေဖို့ဆိုရင် တစ်နေ့ကို ချေထားတဲ့ ငှက်ပျောသီး လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်းစာလောက် ကျွေးရပါမယ်။
ဘေဘီလေးတွေရဲ့ အစာခြေစနစ်က အပြည့်အဝ မဖွံ့ဖြိုးသေးခင်မှာ ကြေလွယ်တဲ့ အစားအစာလေးတွေကို ကျွေးတာက အကောင်းဆုံးပါ။ ငှက်ပျောသီးက အစာ​ကြေလွယ်သလို ဘေဘီလေးတိုင်းအကြိုက်တွေ့စေမယ့် အရသာရှိတာကြောင့် မေမေတို့အတွက် အဆင်ပြေစေမယ့် အာဟာရ တစ်မျိုးပါ။
လေ့လာမှုတွေအရ ငှက်ပျောသီးလိုမျိုး အမျှင်ဓာတ် ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတွေက နှလုံး ကျန်းမာစေပြီး နှလုံးသွေးကြောရောဂါတွေ မဖြစ်စေဖို့ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဘေဘီလေးကို နှလုံးရောဂါ ကင်းတဲ့ ကလေးလေးတစ်ယောက်အဖြစ် ကြီးပြင်းလာစေဖို့ဆိုရင် ငယ်ငယ်ကတည်းက ငှက်ပျောသီး ကျွေးပေးဖို့ လိုပါမယ်။
ငှက်ပျောသီးက အာဟာရ ကြွယ်ဝတဲ့ အသီးတစ်မျိုးပါ။ ငှက်ပျောသီးမှာ ပိုတက်ဆီယမ်၊ ကယ်လ်ဆီယမ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ သံဓာတ်၊ ဖောလိတ်၊ နီကာဆင်၊ ဗီတာမင် B6၊ မဂ္ဂနိ့ အပြင် အခြားသော ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေ များစွာ ပါဝင်နေပါတယ်။
အာဟာရ ပြည့်ဝမှုက ဘေဘီလေးကို အကောင်းဆုံး ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးစေမှာပါ။
ငှက်ပျောသီးမှာ ဆားပါဝင်မှု နည်းပြီး ပိုတက်စီယမ် ပါဝင်မှု များပါတယ်။ ပိုတက်ဆီယမ် ပါဝင်မှု မြင့်တဲ့ အခြေအနေက သွေးပေါင်ချိန်ကို အကောင်းဆုံး ထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ပိုတက်ဆီယမ်က ဘေဘီလေးရဲ့ အရိုးတွေ သန်မာစေဖို့လည်း အားဖြည့်ပေးပါတယ်။
မုန်လာဥနီကပဲ အမြင်အာရုံကို ထောက်ပံ့ပေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ငှက်ပျောသီးမှာလည်း ဗီတာမင် A ပါဝင်နေတာကြောင့် ကလေးရဲ့ အမြင်အာရုံကို အကောင်းဆုံး ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။
ငှက်ပျောသီးမှာ သံဓာတ် ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေတာကြောင့် သွေးနီဥဆဲလ်တွေ ဖြစ်ပေါ်စေဖို့ ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ သံဓာတ် ကြွယ်ဝမှုကပဲ ဘေဘီလေးကို သွေးအားနည်းရောဂါ မဖြစ်စေဖို့ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ငှက်ပျောသီးက ဘေဘီလေးတွေရဲ့ ဦးနှောက် ကျန်းမာစေဖို့ အကောင်းဆုံး ထောက်ကူပေးပါတယ်။ ဘေဘီလေးကို အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်း ကောင်းစေဖို့လည်း ထောက်ကူပေးပါတယ်။
ကဲ…… ဒီလို ကောင်းကျိုးလေးတွေရဖို့ ဘေဘီလေးကို အသက် ၆ လပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့ ငှက်ပျောသီးလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်နော်…………
8 AMAZING benefits of BANANAS for kids! https://www.healthymummy.com/8-amazing-benefits-bananas-kids/ Accessed Date6August 2021
Banana for Babies – Recipes, Health Benefits & Precautions https://parenting.firstcry.com/articles/banana-for-babies-when-to-introduce-health-benefits-and-more/ Accessed Date6August 2021
ဘေဘီလေးက ဂေါ်လီလုံး မျိုချမိတဲ့အခါ
ငှက်ပျောသီးက နေ့စဉ်အစာအာဟာရကို ဘယ်လိုအကျိုးပြုလဲ